Fifidianana filoham-pirenena: arahin’ny Samifin maso ny fampiasam-bolan’ireo kandidà | NewsMada
Fifidianana filoham-pirenena: arahin’ny Samifin maso ny fampiasam-bolan’ireo kandidà
“Manara-maso ny fitantanam-bolan’ireo mpifaninana amin’ny fifidianana ny vaomiera. Ny vola miditra sy mivoaka enti-mamatsy ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana izany”, hoy ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Samifin, i Lamina Boto Tsara Dia, ny faran’ny herinandro teo, momba ny fijoroan’ny vaomiera manokana manara-maso ny vola ampiasain’ny kandidà amin’ny fiatrehana ny fifidianana filohan’ny Repoblika ho avy izao.
Mijery raha misy ny tsy fahatomombanana na tsy fanarahan-dalàna amin’izay fampiasam-bolan’ny kandidà izay ny vaomiera. Ao anatin’izany raha sendra misy ny vola avy amina fanadiovana vola maloto tafiditra amin’ny vola ampiasain’ireo mpifaninana amin’ny fifidianana, araka ny fanazavany.
Miara-miasa ny vaomiera sy ny Samifin
Anisan’ny andraikitra omen’ny lalàna ny Samifin ny fiaraha-miasa amin’ny rafi-panjakana sy ny rafitra tsy miankina. Sampandraharaha miady amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola amin’ny asa fampihorohoroana ny Samifin, ary rafi-panjakana ny vaomiera mpanara-maso. Noho izany, mipetraka avy hatrany ny fiaraha-miasa.
Hadihadiana amin’izany ny loharanom-bola sy ny mpamatsy vola. Raha misy ny trangana fanadiovana vola maloto na famatsiam-bola avy amin’ny loharanom-baovao tsy marim-pototra, mitondra ny raharaha eny anivon’ny Samifin ny mpikamban’ny vaomiera. Manolotra ny raharaha eny anivon’ny fitsarana mahefa kosa ny Samifin. Mety hiafara amin’ny tsy fahazoan’ny kandidà iray mirotsa-kofidina izany, raha voamarina ny fisian’ny fanadiovana vola maloto.
Na ny momba ny mirotsa-kofidina na olon-kafa manao famotsiam-bola, manao ny asany toy ny andavanandro ny Samifin. Raha mahazo fanambarana ahiahy avy amin’ny banky na ireo sampandraharaha rehetra voatondron’ny lalàna fa manao izay fanambarana ahiahy, manao fanadihadiana ny Samifin ary mampita izany any amin’ny fitsarana.